Omunye-United States of abadlali abancane abanekhono kuyinto Brendon Dzhekson. Ngaphezu oyibamba umsebenzi, washeshe wahileleka prodyuserstva kulotshiwe, standup-yosomahlaya. Okwamanje, umlingisi iminyaka engamashumi amathathu nantathu.
Brandon T. Jackson wazalwa lesikhombisa ngoMashi 1984 emzini wase-US Detroit, Michigan. Wayengomunye izingane eziyisikhombisa emkhayeni. Ubaba - Bishop Ueyn Dzhekson, umbhishobhi futhi umfundisi eliphakeme Omkhulu Ministry Ukholo International, kanye umbhali wencwadi ethi "Izimangaliso ziyenzeka." umama Brandon sika, Ivonna Beverli, kuyinto umfundisi. Uyisemkhulu komama wayengumshumayeli Royal Bozeman likaMoya. Amaphephandaba Indiana wayebizwa ngokuthi prodigy.
Manje Brandon T. Jackson uhlala e-Atlanta, eGeorgia. Ngezenzo kumafilimu, ukulwela ukwakha ehloniphekile oyibamba umsebenzi.
Brendon Dzhekson ukuwo West Bloomfield esikoleni e Michigan. Ngemva kokuqeqeshwa, nsizwa baya emzini wase-California eLos Angeles, lapho wenza anamahlaya club comedy. Mina wayejwayelene nosomahlaya ethandwa futhi umlingisi Ueynom Bredi Chris Tucker.
Kusukela ngo-2001, le umlingisi abasha Luvela ngezikhathi ezithile kumagazini ifilimu. Brandon kuqala indima ebalulekile kwaba ngo black amahlaya "Ithrophikhi Thunder," a waseMelika odumile umqondisi ifilimu, umkhiqizi kanye umlingisi Ben Stiller. Waba nendima enkulu - the rapper Alpa Chino.
Ngemva kwesikhathi esithile, ngo-2009, futhi izinkanyezi ku indima Isihloko fantasy ifilimu "Percy Jackson kanye Lightning Thief". Le nsizwa wayeba njengompristi ngumngane omkhulu protagonist uPercy - satyr Grover.
Ngemva kwalokho, ngo-izigcawu eziningana kudlalwa izindima encane Brandon T. Jackson. amabhayisikobho akhe basonta uhlobo Action, Drama, amahlaya kanye fantasy.
Brandon ukudlalwa ezifana amafilimu odumile njengoba "Bowling for eColumbine," "8 Mile," "Big Stan," "Usuku Umhlaba Bama Namanje" futhi "Fast & Furious 4".
Ngemva kwesikhashana, ngo-2011, yaphuma ubugebengu ahlekisayo "indodana Big Umama, njengoba ubaba," okuyinto phambili "Indlu Big Umama" futhi "Big Umama House 2". Brendon Dzhekson inkanyezi Trent Pierce, esikhundleni Washington Yasha ngubani inkanyezi ezingxenyeni zokuqala ifilimu. On isethi, wasebenza omunye edume kakhulu nosomahlaya American Martin Lawrence.
Ngo-2010, Jackson izinkanyezi ku fantasy comedy "Izinyo Fairy," ukudlala indima plan yesibili.
Ngo-2012 kwafika nomunye amahlaya American Kudlala kakade aziwa sikhathi nosomahlaya Brandon "Thunderstruck", lapho lo mfana got indima plan yesibili.
Ngo-2013, Jackson waphinde wabonakala njengomuntu satyr Grover ekusekeleni indaba indodana Poseidon "Percy Jackson kanye Monsters Sea". Esikhathini ifilimu, eziningi okuthakazelisayo futhi ngesikhathi esifanayo izikhathi funny.
Ngemva kwesikhathi esithile, Brendon Dzhekson banquma ukuzama isandla sakhe omunye movie uhlobo. Ngo-February 2017 kwaba khona ifilimu uhlobo of Thriller futhi horror "Phantoms Eloise", lapho kwakuliwa khona enye izindima eziyinhloko Della Richards waya umlingisi abasha. Le filimu ehlukile sasimthanda izibukeli futhi baxgeki.
Brandon iba liyabonakala kakhulu futhi omunye ethandwa kakhulu abadlali abasha cinema American. Ikakhulukazi uhlobo comedy.
Hensel nodade: isithombe, empilweni yakho
Imodeli nomlingisikazi Rebecca Romijn: Biography, Filmography
Mdlali "Rubin" Maksim Lestenn: Biography
Ariana Grande unciphile? "Ngaphambi" futhi "ngemva": ukumangala imfihlo ukuguqulwa kukaJesu isimo
Umqondisi Yevgeny Karelov: Biography, Filmography
I-CSS Framework: Impromptu kanye nemiphumela
Aluminium balcony: ubukghoni nokubhalelwa
Inkukhu umlenze kuhhavini - okumnandi futhi kulula
Konke zokhuni isitshalo: zokutshala nokunakekela, izici ngabanye
Rome: Ubude neMpi 2 - nezidingo zomshini kokukhululwa date